Boldနဲ့Fonts — MYSTERY ZILLION
December 2007 edited August 2009 in DTP
[FONT=&quot] -Win---(Bold) Fonts ,DTP သမားတွေ မကြာခဏတွေ့ရတက်တဲ့ ကိစ္စလေးပါ..[/FONT]
[FONT=&quot]စာတွေ ရိုက်ပြီးလို့ နှစ်သက်ရာစာတွေ၊ခေါင်းစဉ်တွေကို Bold လုပ်ချင်လို့ Bold icon ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါ Bold လုပ်လို့ရပြီး letters မှာ Bold မရပါ။ Print ထုတ်တဲ့အခါမှာ Bold လုပ်ထားတာတွေမပါလာတော့ပါ။ဒါနဲ့ error တွေရှိလာလို့ လိုက်ရှာကြည့်တော့ office, pagemaker7.0,works တွေမှ ဘာမှပြဿနာမရှိ၊ event viewer မှာလဲ ဘာမှမတွေ့ရ။[/FONT]
[FONT=&quot]ဒီလို Bold မရတဲ့ error တွေကို Windows XP Гўв‚¬вЂњ Vista စတဲ့ OS တွေပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ MS officeXP, SP1, 2007. Works . Pagemaker7.0 ကိုအသုံးပြုပြီး ATM software (Adobe Type Manager Гўв‚¬вЂњDeluxe-4.1,4.0) Install လုပ်ထားတဲ့ Computer တွေမှာတွေ့ရပါတယ်။[/FONT]
[FONT=&quot]မသင်္ကာလို့ ATM ထဲက Bold မရတဲ့ -Win--- Fonts တွေကို Remove လုပ်၊ပြီရင် c:\_Windows\_fonts ထဲက မရတဲ့ -Win--- Fonts တွေကို Delete လုပ်ပြီး DTP Software အားလုံးကို ပိတ်လိုက်တယ်။ မူရင်းCDထဲက -Win--- Fonts တွေကို C:\_.... fonts ထဲကို Copy လုပ်လိုက်တယ်( Fonts မှာ TTF,PFM)နှစ်မျိုးလုံးကိုတွေ့ရတယ်):2: [/FONT]
[FONT=&quot]winword ကိုခေါ်ပြီး Bold မရတဲ့ Fonts တွေကို ပြန်ပြီအသုံးပြုကြည့်တယ်Гўв‚¬В¦ Bold လို့ရတယ် Print ထုတ်တဲ့အခါမှလည်ပြန်တွေ့ရတယ်။ အားလုံးကောင်းသွားတယ်။ Bold ထားတဲ့ letters တွေကို Copy လုပ်ပြီး pm70 ထဲမှာ Paste လုပ်တဲ့အခါ အဆင်ပြေတယ်။သို့သော်လည်း ATM ထဲမှာ Bold မရတဲ့ -Win--- Fonts တွေလုံး၀မထည့်ထားပါဘူး၊ ထည့်လိုက်ရင် မကြာခဏ ဒီလိုပြဿနာတွေ ဖြစ်တက်ပါတယ်။ Adobe CS အုပ်စုတွေမှာ ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုကို စာဖတ်သူဂရုစိုက်ကြည့်ပါ။ ကျွန်တော်လည်း ATM ရဲ့အသုံး၀င်မှုကို လေ့လာအဖြေးရှာဆဲပါ။[/FONT]
[FONT=&quot]ရွှေမြို့တော်ရဲ့ DTP လုပ်ငန်းတွေမှာ ယနေ့အချိန်ထိ Win--- Fonts တွေကိုသုံးတာ များပါတယ်။ myanmar,Zawgyi သုံးတာ အလွန်အလွန်နည်းပါတယ်။ တစ်ခုတော့ ရှိတယ် လက်ကွက်စာရွတ်တစ်ခုကို(၁၀၀)ကျပ်နဲ့ရောင်းပါတယ်။ဒုတိယအသုံးအများဆုံးကCE, Metrix Fonts တွေပါ။MetrixFontကPDFပြောင်းတဲ့အချိန်မှာပြဿနာများပါတယ်။အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)မှာfont က -win---Researcher ၊size က ၁၆ ပါ။ နယကမှာ myanmar2 ကိုသုံးပါတယ်။ စီမံကိန်းရုံးတွေမှာ ကိန်းဂဏန်းတွေအတွက် အခြား fonts နဲ့ myanmar2 တွေကိုသုံးပါတယ်..[/FONT]
[FONT=&quot]ယူနီကုတ်သုံးတဲ့စက်ပေါ်မှာ ရိုက်ထားသောစာများ(docx.xlsx.pptx,doc,xls,pptГўв‚¬В¦.)ကို ယူနီကုတ် မသုံးတဲ့ စက်ပေါ်မှာ ပြန်စစ်ဆေးတဲ့အခါ page setting တွေက ကြီးနေပါတယ်။ xls တွေမှာ စာကြောင်း တစ်ကြောင်းစာခန့် ပိုနေပါတယ်
Web ပေါ်တက် Zawgyi နဲ့တက်.
Post ဖတ် Zawgyi နဲ့ဖတ်.
Search လုပ် Zawgyi နဲ့လုပ်ပါГўв‚¬В¦
[/FONT][FONT=&quot]စာဖတ်သူ ပိုပြီ ပြည့်စုံသိရအောင် ၀တ္တူ၊မဂ္ဂဇင်း၊ဂျာနယ်၊စာစောင်တွေကို ဖတ်ကြည့်ပါ။[/FONT]
[FONT=&quot]မလိုအပ်သော fonts တွေကို စက်ထဲမထားပါနဲ့၊လိုအပ်မယ်လို့ ယူဆရသော fonts တွေကို စာရင်းပြုစု စက်ထဲမှာထည့်ထားပါ။ fonts error အတွက် hs clean disk pro software ကိုသုံးကြည့်ပါ။DTP သမားတွေ အတွက် fonts အမျိုးအစားအလိုက်နှင့် size အလိုက် Print ထုတ်ထားရင်ကောင်းပါတယ်။ဥပမာ(---Arthouse,U4)စသည့်ဖြင့်ပါ။လိပ်စာကဒ်၊ဖိတ်စာ(မင်္ဂလာ ဆောင်၊အလှူ)ပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာများစွာအထောက်အကူပြုပါတယ်။Boldပြဿနာဖြေရှင်းနည်းအမျိုးမျိုးက တစ်ခုကိုတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်Гўв‚¬В¦[/FONT]
[FONT=&quot]DTP သမားတွေ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့နေရာမှာ အမြဲကြုံတွေ့ရတာ တစ်ခုရှိတယ် customer ဆိုတာ logical အရအမြဲမှန်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာသမားအတွက် physical အရ မှန်နေပါတယ်။[/FONT]
[FONT=&quot]Next Post တွေမှာ ရှင်သန်အောင်မြင်နေဆဲ pagemaker ၊Font Character တွေကို ကောင်းစွာကြည့်လို့ရတဲ့ Character Map pro အကြောင်းဆက်လက်တင်ပြသွားပါမည်။[/FONT]
[FONT=&quot]စာဖတ်သူ လိုအပ်သလို ဆက်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်Гўв‚¬В¦
ရိုးသားစွာဖြင့် ချစ်စွားသော icefirester[/FONT]
hello Mr Icefirester
Please i would like to have Win Myanmar font latest version.
if you can and possible, thankalot you